केटी संग भारतीय - भारतीय केटी
केही समयअघि क्रिसमस, शिक्षक एनी प्राप्त देखि एक फोन कल भारत । उनको बुबा, जसले हुन अनुमानित छ मा छुट्टी मा, स्पेन देखि छ एक होटल मा जयपुर छ । छोटो-हात तपाईं पुस्तक एक उडान गर्न भारत र बाटो मा छ । बाटो मा, त्यो बुझ्छ बोर्ड विमान धनी भारतीय अरुण छ । आइपुगेपछि भारत, एनी बाटो मा छ, होटल मा जो उनको बुबा थियो उनको चोरी आफ्नो थैली र तपाईं प्राप्त गर्न थाहा भारतीय. छ, प्रबन्धन गर्ने एनी गरेको सम्पत्ति देखि चोर फिर्ता प्राप्त गर्न र अर्को केही दिन आफ्नो रिक्शा माध्यम जयपुर छ । एक गहिरो बन्धन दुई बीच विकसित. रूपमा एनी होटल कोठा मा उनको बुबा संग एक सूची को नाम प्रभावशाली भारतीय, त्यो पत्ता लगाउन खोज्छ के यो पछि छ, तर कुनै एक कुरा गर्न चाहन्छन्, उनको सिंह मा, एक रहस्यमय.
मा महल, एनी मुठभेडों एक अचम्मको तरिका फिर्ता अरुण, छोरा. मदत गर्न एनी भेट्टाउने मा उनको बुबा अरुण तपाईं निम्तो गर्न एक दान घटना अर्को साँझ । जहाँ कि हो एनी आशाहरू को प्रभाव संग भारतीय धनी आउन कुराकानी. पछि अरुण बालक जस्तो को डाह, उहाँले बनाउँछ आफ्नो सेवक भनेर सुनिश्चित गर्न घर नष्ट झुपडबस्तीमा र उहाँले पक्राउ गरेको छ । दान चाड मा एनी बाहिर पाउन, कि विशाल देखि परी कथा, जो तपाईं आफ्नो कक्षा आफ्नो प्रस्थान गर्न पूर्व भारत थियो अझै अवस्थित भन्नुभयो, र सम्पत्ति को स्थित छ । एक मित्र को, एनी बुझ्छ कि उनको बुबा थियो संग एक सम्बन्ध भारतीय सुडेनी. यो ट्रेल जान्छ मा रूपमा, मुद्रा छोड्न थियो एनी पछि बुबा, देश थियो स्थापित एक जग, केही वर्ष पहिले मृत्यु भएको छ । मदत गर्न सक्छ आफ्नो भाइ, माइनस. उहाँले हराएको छ पछि एक दुर्घटना दुवै आफ्नो खुट्टा र अब द्वारा बासिन्दाहरूलाई को रूपमा झुपडबस्तीमा एक जादूगर छ । तर पहिले आफ्नो कुराकानी संग मिनी एनी प्राप्त देखि मराठी, भन्ने समाचार प्रहरी पक्का थियो कि उनको बुबा मरेको थियो. एक कार दुर्घटना पछि, उहाँले जलाइएको ट्याक्सी, र मात्र आफ्नो विवाह घन्टी बाँकी छ । गहिरो हैरान, एनी पाता सांत्वना मा अरुण र, उहाँलाई साथ अन्त्येष्टि समारोह को बैंक मा. एनी तय गर्न दृढ, तर अरुण भाग मा उनको सम्भ्काउनु गर्न एक खाने संग आफ्नो आमा र अन्य अतिथि । यो आउछ कि भाषा सुडेनी मार्था समय मा आफ्नो विवाहको छ । अर्को दिन, अरुण एनी विमानस्थल, तर उहाँले पहिले दिन्छ तपाईं एक पवित्र ठाँउ, र उनको बनाउँछ एक प्रस्ताव को विवाह । को एक चिन्ह रूपमा, आफ्नो प्रेम, उहाँले दिनुहुन्छ उनको. यो क्षण मा, अचानक देखिन्छ माइनस, र एनी सल्लाह गर्न जान चैपल, त्यसपछि उहाँले दूर लगियो, प्रहरी द्वारा छ । पूर्ण एनी मान्दैनन् विवाह प्रस्ताव । तर, यो परिषद को यो विजार्डले अनुमति दिन्छ तपाईं कुनै बाँकी छ र त तपाईं बाहिर खोज्न सबै जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन् र निर्णय प्रयोग गर्न फिर्ती उडान । आइपुगेको औपनिवेशिक चिहान चैपल, एनी अचानक पाता आफ्नो ‘आफ्नै’ गम्भीर. यो मा पढ्न छ कि एनी क्रुगर को उमेर मा मृत्यु, तीन महिना । त्यसैले, प्रश्न लागि एनी: जो जहाँ उनी साँच्चै छ यो मूल छ । बढी सिक्न तपाईं गर्न खोजे बनाउन मदत संग अरुण माइनस मा जेल, तर यो मानिन्छ मृत्यु, एक उम्कन प्रयास. जेलमा तिनीहरूले पूरा, तर, अझै पनि छ जो भइरहेको यहाँ आयोजित, र एनी बुझ्छ कि अरुण छ माथि लागि विनाश घर जिम्मेवार छन्. पछि तिनीहरूले संदिग्ध भन्ने यसको मूल गर्न सम्बन्धित छ को काम सुडेनी सँगै, त्यो मदत चाहन्छ डा, आज निर्देशक को जग । बुझाउँदै को भूमिका मा महिला भारत र को जन्म एक केटी को परिवार को लागि, सामान्यतया एक सानो विपत्ति, र मात्र छोराका रूपमा मास्टर धारकहरुको स्वागत छ । यो छ एनी, र उनको प्रदान गर्न पैसा देश छोड्न तुरुन्तै । त्यो त्यो बनाइयो को द्वारा मदत, एक केटा छ । संग आतंक, एनी मानिलिनै पर्छ कि यो छ पहिलो-जन्म वास्तविक उत्तराधिकारी को. पछि, त्यतिन्जेल मा, अरुण देखिन्छ, छ छैन व्याख्या गर्न आफ्नो»आमा»उहाँलाई उहाँले छ कि छैन, उनको छोरा । साथै, उहाँले छोडेर एक शब्द बिना, सम्पत्ति छ । आश्चर्यजनक, एनी बुबा फेरि देखिन्छ मा । उहाँले दिन्छ आफ्नो»छोरी», र आवश्यक लुकाउने ठाउँ छ किनभने उहाँले, खतरा, किनभने उहाँले छ गलत सेट को आमाबाबुले छ । एनी ल्याउन कटिबद्ध छ, यो निर्लज्ज काम सार्वजनिक गर्न. संग, मदत गर्न क्षमा गर्न उनको लागि आफ्नो व्यवहार र प्रतिज्ञा गर्न घर पुनर्निर्माण गर्न, त्यो पाता लुकेको कागजातहरू कि संकेत, एक थप आठ छोराछोरी थिए । एनी पछि पनि स्पष्ट छ कि तिनीहरूले नष्ट हुनेछ, अनुसन्धान संग, भारतीय. अरुण, तर, खो दि्छ जमीन अन्तर्गत आफ्नो खुट्टा रूपमा, उहाँले महसुस गर्नुपर्छ भनेर उहाँले आउँछ खराब फोहर वस्ती को जयपुर छ । उहाँले मानिन्छ थियो जन्म उच्चतम जाति, भन्दा कम छ. उहाँले महसुस गर्नुपर्छ, उहाँले गर्न सक्नुहुन्न मा लाज को विभिन्न प्रयोगकर्ता चयन गर्न, आत्महत्या । यो, तथापि, छ, को एक परिणाम रूपमा गवाही एनी र उनको पिता, अधिकारीहरूले जानकारी थिए. रूपमा उतराधिकारीनी को परिवार को सिंह गर्न सक्छन् एनी जग गरेको वित्तीय समर्थन र आफ्नो लामो-पोषित इच्छा लागि, तिरस्कृत, र अनाथ केटी देखि जयपुर, एक गाउँ को»गर्ल्स», एक वास्तविकता छ । फिल्म मा गोली थियो जयपुर र अम्बर.
जर्मनी मा उहाँले देखा रूपमा, एक दुई, संग प्रत्येक दुई मिनेट को म्याच मा
पहिलो भाग पुगेको लाख दर्शकहरु र एक बजार शेयर को, को दोस्रो भाग, लाख दर्शकहरु र शेयर बजार । डीभिडी मा फिलिम थियो । छ । फिल्म पाए धेरै सकारात्मक समीक्षा छ । यो प्रशंसा मा आफ्नो पोस्ट»केटी संग भारतीय»- मा एक शिक्षक भारतको कहानी राज्य भनेर शोभा संग शानदार, सिनेमा जस्तै-तस्वीर अधिक तीव्र रूपमा रंग, मन्दिर, भव्य महलों र हिउँ-ढाकिएको हिमालय, तर पनि क्रूर गरिबी, शोषण र जाति प्रणाली थियो, सफल, आध्यात्मिक चार्ज गर्न देश ल्याउन एक सानो नजिक छ । यो बताए»को परी-कथा भारत»संग गर्न केही थियो दुःखी वास्तविकता, तर, यो देखिन्छ र राम्रो अभिनेता विश्वस्त छ ।
← निःशुल्क अनलाइन डेटिङ पंजीकरण बिना भारत मा
भारतीय पुरुष - भारतीय केटा - भारतीय मान्छे →